असोज २७, २०७४ काठमाडौं, २७ असोज – के चराहरूको भाषा हामीले बुझ्छौं ? चराहरूले सम्मेलन गरे भने के विषयवस्तु उठाउलान् ? संवेदना र चाहना चराहरूको जीवनमा कसरी अटाएका होलान् ? यस्ता प्रश्नको उत्तर तपाईले ठ्याक्कै नभेट्न सक्नुहुन्छ नाटकमा । तर काठमाडौंको शिल्पी थिएटरमा मञ्चन भइरहेको नाटक ‘चराहरूको सम्मेलन’ ले तपाईको मनमा एउटा बेग्लै रोमाञ्चकता पैदा गर्छ ।